Cilmu-nafsiga | Caafimaadka Maskaxda Texas | Xaaladaha Caafimaadka Maskaxda ee Caadiga ah
Cilmu-nafsiga waxaa loola jeedaa xaalad maskaxeed oo ku lug leh jahwareer u dhexeeya waxa dhabta ah iyo waxa aan dhabta ahayn. Cilmu-nafsiga wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhammaan shanta dareen ee qofka, dabeecaddiisa, iyo shucuurtiisa. Inta lagu jiro xilliga maskaxda, maskaxdu waxay lumisaa xoogaa xiriir ah oo ay la leedahay xaqiiqda. Qofku waxaa laga yaabaa inuu leeyahay khibrado jahwareer iyo cabsi gelinaya oo keliya nafsadiisa, laakiin sidoo kale kuwa ku hareeraysan.
Calaamadaha cudurka nafsiga waa ku kala duwan yihiin, laakiin laba astaamood oo caan ah waa dhalanteed iyo dhalanteed. Qofka riyadu ku dhagtay wuxuu maqli doonaa, dareemi doonaa, arki doonaa, urin doonaa ama dhadhamin doonaa wax aan dhab ahaan ku dhicin dhab ahaan. Riyooyinka dhalanteedka ah, in kasta oo aan lagu salayn xaqiiqda, waxay dhab u yihiin shakhsiga iyaga haya markaa waxay noqon karaan kuwo cabsi badan iyo khalkhal geliya nolosha. Dhalanteed waa marka qofku ku adkaysto aaminaad adag shay bulshadu guud ahaan u aqoonsan lahayd inuu yahay mid aan run ahayn ama aan ku dhisnayn xaqiiqda. Aaminsanaantani waxay cabsi iyo jahwareer iyo carqalad ku noqon kartaa nolol maalmeedka qofka iyo dadka ku xeeranba.
Cilmu-nafsiga guud ahaan wuxuu ku dhacaa isku-dhafka hidde-wadaha qofka iyo waayaha nolosha. Dhacdooyinka kadeedka badan, isticmaalka maandooriyaha, ama xitaa xaaladaha caafimaad ee jireed (Dementia, Parkinson’s, iwm.) Waxay kicin karaan cudurka maskaxda ee shakhsiyaadka qaarkood. The Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda waxay soo warinaysaa in ugu badnaan saddexdii qof 100 kii qofba uu la kulmi doono xaalad maskaxeed noloshooda 1. Mararka qaarkood waaya-aragnimada xad-dhaafka ahi waxay u kicin kartaa muddo kooban oo waallida qof ah oo soconaya dhawr maalmood oo keliya, ka dibna aan mar dambe soo marin Dadka kale, cilmu-nafsi waxay u noqon kartaa muuqaal ka mid ah xaaladda caafimaadka maskaxda sida; schizophrenia, cudurka dhimirka ee ‘schizoaffective disorder’, ‘laba-cirifoodka’ (hore loogu yeeri jiray niyadjabka manic), iyo niyad jab weyn .
Schizophrenia waa hal xaalad caafimaad oo maskaxeed gaar ah oo astaamaha cudurka nafsiga ay ku dhacaan. Calaamadahaasi way imaan karaan waana tagi karaan waxaana badanaa caawiya daawooyinka. Marka laga soo tago dhalanteedka iyo dhalanteedka, dadka qaba schizophrenia waxay sidoo kale la kulmi karaan hoos u dhac xiisahooda iyo dhiirrigelin ay wax ku qabtaan, ku adkaanta muujinta ama tarjumidda shucuurta, ama ka noqoshada howlaha bulshada iyo xiriirada. Calaamadaha garashada sidoo kale waxaa la kulma shakhsiyaadka la nool shisoofrani, sida awood liidashada go’aan qaadashada, diiradda saarista howlaha, iyo adeegsiga macluumaadka isla marka la barto.
Astaamaha shisoofrani guud ahaan waxay kobcaan inta udhaxeysa da’da 16 iyo 30 2. Ma jiro sabab caan ah oo keenta shisoofrani, laakiin cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in hiddo-wadaha iyo is-dhexgalka ay la leeyihiin deegaanka shaqsiyeed ay door ku leeyihiin horumarinta cudurka iyo sidoo kale dheelitirka kala duwan ee kiimikooyinka maskaxda ku jira.
Cudurka Maskaxda ee Maandooriyaha
Sababta kale ee waallida waa isticmaalka mukhaadaraadka iyo aalkolada, cilmu-nafsiyeed la yiraahdo walax-kicis. Xaaladdani waxay keentaa calaamado sida dhalanteed iyo dhalanteed. Xaaladaha badankood khibradda astaamahani waa mid muddo-gaaban ah, oo soconaysa saacado ama maalmo keliya. Marar dhif ah, isticmaalka culus iyo muddada-dheer ee daroogada waxay sababi kartaa cilmu-nafsi soconaya bilo ama sannado, muddo dheer ka dib markii daroogadu ka baxdo jirka. Daaweynta cilmu-nafsiyeedka walxaha keena waxay ku lug leedahay daaweyn deg deg ah, oo ay ku jiraan isbitaal dhigid, iyo daryeel muddo dheer ah, oo badanaa ku yaal goob la deggan yahay iyo adeegsiga daawooyin iyo daweyn dabeecad.
Calaamadaha iyo Calaamadaha Cilmu-nafsiga
Ma aha in qof kasta oo la soo dersa cudurka dhimirku aanu yeelan doonin astaamo isku mid ah. Shakhsiyaadka qaarkood waxay la kulmi doonaan qaar, halka kuwa kalena laga yaabo inay la kulmaan kuwo kale.
Hallucinations – maqal, arag, dhadhamin, ur, dareemid waxyaabo aan run ahayn
Dhalanteed – caqiidooyin ama fikrado aan run ahayn (yacni rumaynta inay yihiin shakhsiyad taariikhi ah)
Fikradaha ama fikradaha aan caadiga ahayn
Dhaqdhaqaaqa jirka oo aan caadi ahayn
Dhibaato ku timaadda xoojinta ama dhammaystirka howlaha
Hoosudhaca muujinta shucuurta
Danta xiisaha howlaha / bulshada
Hadal aan iswaafaqsanayn ama hadal ka boodsan
Tuhunka dadka kale
Nadaafad shaqsiyeed oo liidata, jadwalka hurdada, ama caadooyinka cunida
Cilmu-nafsiga iyo Daaweynta Cudurka Schizophrenia
Fursado badan oo daaweyn ah oo ay ka mid yihiin daawo, tababar xirfadeed, teraabiyada cilminafsiga, iyo tas-hiilaadka lagu daweeyo ee la dego ayaa loo heli karaa dadka la soo dersa cilmu-nafsi ama la nool schizophrenia. Ka bogsashada buuxda ee cudurka dhimirka waa suurtagal, iyadoo kuxiran waxa sababay, rajaduna had iyo jeer waa suurtagal iyadoo aan loo eegin xaaladda qofka. Cilmi baaris ayaa muujisay in haddii qofku helo caawimaad sax ah sanadka ugu horeeya ee qaybtiisa ugu horreysa ee cudurka dhimirka, sida laga soo gudbo daryeel khaas ah oo isuduwsan , waxaa jirta fursad fiican oo ay ku baran karaan sida loo maareeyo cudurka una noolaadaan nolol tayo sare leh.
Si aad wax badan uga barato cilmu-nafsiga iyo shisoofrani iyo noocyada daaweynta ee kala duwan, waxaad booqan kartaa bogaggaan:
Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Texas (HHS) bogga daryeelka takhasuska leh ee qaybta hore ee cilmu-nafsiga.
Isbahaysiga Qaranka ee Cudurka Maskaxda (NAMI) – Cilmu-nafsi hore.
Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda (NIMH) – Schizophrenia.
Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda (NIMH) – Qeybta Koowaad Xaashida Xaqiiqda Maskaxda.
Qaybta tababarka tooska ah ee barashada caafimaadka hab dhaqanka ee ku saabsan cilmu-nafsiga iyo Schizophrenia.
1. Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda: Xaashida Xaqiiqda: Qeybtii Koowaad ee Cilmu-nafsi.
2. Aasaaska Maskaxda iyo Dhaqanka: Waa maxay Schizophrenia?